N ’steeti ndị uwe ojii ịchọrọ ka amachibido ịse vidiyo nke ndị uwe ojii na ndị na-enye“ aka ”Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 6 December 2019	• 9 Comments
N'obodo Sinkiang nke China bi n’otu ndi mmadu a na-akpo Uyghurs. Ha bụ ndị Alakụba n'ozuzu ha na ala China ga-ahọrọ ịhụ nke a n'ụzọ dị iche. Ihe onyonyo a anyị hụrụ bụ nke ọgba aghara na otu ndị na-eyi ọha egwu nke foto na vidiyo yitụrụ nke nke Ọ KWES .R.. Oge eruola iche eziokwu ahụ bụ na gọọmentị dị ka ọ nweghị ọzọ na-enwe ike ịkwado òtù ndị na-eyi ọha egwu n'onwe ha na ịhazi mkpuchi onwe ha. I nwekwara ike ime nke ahụ na ndị mmekọ mba ụwa, iji hazie nnupụisi nke ịkwesịrị ike itinye aka na nsogbu.
Ngagharị iwe a na Hong Kong bụ ezigbo ụzọ ndị gọọmentị China nwere ike dozigharịa ike ma guzobe steeti ndị uwe ojii n'ụdị Uighur. N'okwu a, ha abụghị ndị na-eyi ọha egwu Muslim, mana enwere ike ịpụta ya na US onye ga-abanye n'etiti ndị ngagharị iwe n'okporo ámá Hong Kong. Maka ndị na-eche na a ka nwere ndị iro na ogbo ụwa, tụfuo echiche ahụ. Mba niile na-arụkọ ọrụ ọnụ n’ụwa niile iji gosipụta ndị uwe ojii. Na Europe na US ọ bụ onye gbara ọsọ ndụ nwere ndị na-alụ ọgụ IS dị n'okpuru, na Hong Kong ọ bụ ndị omekome America, na mpaghara Sinkiang ọ bụ ndị Alakụba. Mgba aka siri ike bụ nsonaazụ achọrọ, iyi ọha egwu ma ọ bụ ntụgharị agba (Usoro CIA Gene Sharp) bụ ụzọ ọ ga-esi mee ya.
Gụọ na akwụkwọ ọhụrụ m ka mba niile si arụkọ ọrụ ọnụ n’ụwa niile na otu akwụkwọ ọgụgụ isi n’azụ ihe nkiri.
Yabụ ọ bụrụ na inyocha ihe nkiri dị n'okpuru, ị nwere ike ịhụ etu esi kọwapụta etu esi mee ihe ọjọọ na China, mana anyị na-eleghara eziokwu ahụ anya na anyị nọ n'ụzọ nke ọma na steeti ndị uwe ojii yiri ya na West. Zọ ahụ dị nwayọ bụ nke iyi egwu ụjọ na mpụ na-arị elu (n'ụdị zighachi akwụkwọ nnọchiteanya mpụ dika ndi Mocro Mafia na ndi nwuru anwu Heineken). Site na nke a ị ga - ewebata ụdị iwu dị iche iche nke agaghị abụ ihe a na - agaghị eche eche, mana site na ịmepụta onwe gị, ị ga - eme ka ndị mmadụ nwekwuo nnabata N'ihi ọrụ nke Willem Holleeder, anyị nwere iwu ugbu a na-eme ka o kwe onye ọ bụla ụta maka mpụ ma jiri 'okpueze gosipụta' ya. Site n’itinye ndị ọka iwu dịka ndị emetụtara, ị ga - eme ka a ghara imebi otu ahụ. Otu a na-eme ugbu a na ndị mgbasa akụkọ mgbasa ozi nke steeti. Pịa na njikọ anụnụ anụnụ maka nkọwa zuru ezu.
Agbanyeghị, iji nye ndị uwe ojii ọkwa ịmalite, ị ga-achọ ọgba aghara nke ọha. Na France nke nwere akwa ọfụma nke ọma. Ọ dị mfe ịnwetara ụfọdụ ndị agha si n'otu mba EU ma tinye ha na uwe ndị nkịtị ka ha nwee uwe na-acha odo odo. Nnukwu okpukpo mara mma maka mba dịka England na Netherlands bụ nchikota nke nsogbu na ọtụtụ ndị gbara ọsọ ndụ. Igwe fuuz niile dị ugbu a na obere ntụ ntụ dị iche iche. Onye isi ala Erdogan nke Turkey na-enwe ntakịrị ndidi na ndị mmekọ Europe, n'ihi na ha anaghị akwado ya n'ịkwado nnabata ndị gbara ọsọ ndụ, ha anaghịkwa anabata ya na EU. Naanị ya ga-emeghe mgbama ndị gbara ọsọ ndụ na ebe a. Mgbapụta Brexit bụ ihe nwere ike ime na ntụ ntụ ntụ akụ na ụba; na-esote nsogbu akụ na ụba nke ahụ ga-ada site na US.
Ọ bụrụ na akụnụba dara ma bụrụ ndị a ga-ata ụta maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke aka nri, ị tọọ ntọala maka ọgba aghara dị ukwuu. Site na ọgba aghara ahụ ọ kachasị mfe itinye aka siri ike. Agbakwunyere ndị ọzọ na-edina alabi n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya site na nsogbu ihu igwe dị egwu. Egwu na ụwa ga-akwụsị n'ime afọ 12 dabara n'ụzọ na-enweghị nsogbu n'ime UN XXX UN. Ihe ndị a na-emetụta ọnọdụ ihu igwe ga-ewusi oku maka ọchịchị aka ike zuru ezu ma duga a ochichi ọchịchị okike (N'ezie n'okpuru usoro ochichi onye kwuo uche ya). Na-agụ gị isiokwu a ọzọ iji nweta nkọwa ahụ nke ọma.
Igwefoto juru n’ala anyị. A kwadebere iwu ahụ iji wepu ndị niile na-enyo enyo site na ọha mmadụ n'okpuru pretext nke "psychosis" ma ọ bụ "mgbagwoju anya." Na akoodu uche dị njikere ịnya ịnya ma kpọga ndị mmadụ n'ogige "nlekọta". You nwere ike iji nke a tụnyere ihe a na-akpọ 'ọzụzụ' na vidiyo dị n'okpuru. Ndi mmadu kwenyere na odighi ihe ojoo na ihu igwe ma obu ndi mmadu na - emegide EU (ndi ziri ezi nke nwere ike ịkọwa maka oke akụ na ụba n'oge ahụ) na-ata ahụhụ site na aghụghọ, a ga-elekwa ya anya dị ka nke a obughi ha ozo psychotic ibu. Agaghịkwa agwa ndị uwe ojii ma ọ bụ "ndị ọrụ na-elekọta mmadụ" nke ọgụgụ isi ka eserese mgbe ewepụrụ ndị ekwenye ekwenyeghị.
Ndị na-atụ ụjọ na a ga-ejide ha nwere ike ịnwe ahụhụ ma chọọ ọgwụgwọ. Mgbe niile, anyị ga-echekwa ihu igwe.
Egosiputara anyi ndi uwe ojii nke ndi China. American (Fed) na European Central Bank adịla njikere imekọ ihe ọnụ site n'inye nnukwu ụlọ ọrụ ego ebipụtara ka ọ dịkarịa ala na ọmụrụ nwa, ka ha wee nwee ike ịzụta nke ha. Nke a emeela ka ọnụ ahịa ngwaahịa ahụ sie elu. Enwere ike itinye nsogbu nsogbu akụ na ụba na akpụkpọ ụkwụ nke ikike site na agha azụmaahịa Trump dara ada na esemokwu Brexit, ebe ezigbo ihe kpatara ya bụ ụgwọ dị elu na-enweghị isi. Mgbe nnukwu ụlọ ọrụ ndị ahụ niile azụghachilarịrị mbubata ha na mkpọka ahịa ngwaahịa, anyị nwere nsogbu a chọrọ iji webata usoro ego ọhụrụ (traceable crypto) na otu nnukwu ụlọ ọrụ nwere ike ịbụ nke steeti. Mgbe ahụ anyị nọ na usoro komunizim, nke bụ isi ike na smart ụzọ nyefere.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: ypsilon.org, telegraaf.nl, alt-market.com
Ikeketeorie na ọchịchị onye kwuo uche ya, ụzọ dị nwayọ na-eduga ọchịchị fasizim
Rutger Bregman kpọrọ oku maka ọchịchị onye isi ọchịchị UN
Tags: ese foto, china, Ndị China. mpaghara, obodo, agba, ogige agụmakwụkwọ, Hong Kong, Ndị obodo, uwe ojii, egwu, ndị na-eyi ọha egwu
6 December 2019 na 14: 17
Mmegide a na-achịkwa na-abụ ebumnuche nke ịrabanye ndị mmadụ na ụgbụ nchekwa yana ịfụ ihe. Lee otu Alex Jones si tọọ ntọala maka nkọwa nke psyhcose. Ọ bụrụ na ị na-agbaso "echiche nke ịgba izu", ya mere enwere ekele nke mmụọ na Alex Jones:
6 December 2019 na 14: 27
A dọrọlarị anyị aka na ntị ... ma ọtụtụ ka achọghị ịhụ ya. Ndị ọzọ na-ahọrọ ịrụ ọrụ n'akụkụ sistemụ ahụ ka ha wee nwee nchebe.
FreshWind dere, sị:
5 January 2020 na 20: 23
Onye ochichi aka ike enweghi “nchebe” n’akuku, obughi kwa elu!
Ọ bụ orgy nke psychopaths onye na-eche ibe ya ihu.
E nwekwara akụkọ ifo dị omimi na a na-akpọ "gọọmentị" ma ọ bụ "steeti" "Ha" na-eme steeti ndị uwe ojii. Nke ahụ bụ ihe ‘gọọmentị ahụ’ chọrọ ikwere. Ihe mere bu eziokwu bu na obughi ‘ha’, kama obu nwanne nna gi, nwanne nwoke ma obu nwanne, nwa nwoke ma obu nwa nwanyi, ezi ulo a na nkita mara nma.
Nke ahụ bụ ndị ahụ a na - akpọ aha bụ ndị na - akwa akwa otu ugbu a na telivishọn na 'ha' nwere ya siri ike. Ma ozugbo ịbanye na uwe elu ma kechie ngwa ọgụ ahụ, ihe niile na-apụta ma bụrụ nke na-apụtaghị ọgụ, nwa amaala na-achịghị ihe ike ma gbuo ... .. n'ụzọ dị njọ n'ihi agụụ ihe ọjọọ. A na-ahọpụta "A" na IQ dịkarịa ala 83 na opekata mpe 93. Nke ahụ bụ otu ahụ nwere ihe 'kachasị mma' (psychopathic). Ndị agha America na-eme nyocha nke a kemgbe 1919 n'ọchịchọ ebighị ebi ha maka anụ anụ.
Otu aka ahụ dịruru n’anya bụ na mmadụ niile, tinyere ndị uwe ojii n’onwe ha, ka na-ekwu maka ‘acha anụnụ anụnụ n’okporo ụzọ’. Afọ ole na ole gara aga ‘a na-etinye ha’ n’agha ojii. O doro anya na ọ nweghị onye ọzọ maara ihe kpatara ejiri jiri igwe ojii dochie oji mgbe WWII, nke enwetara onye otu NSB (enyi nke zur Lippe B) inye ha uwe ndị ahụ.
Ọbụghị ihe ịtụnanya m mere na ịnụtụghi ihe ọ bụla site na ndị Juu…. na “acha anụnụ anụnụ” bụ nke metụtara nke ahụ. Ezigbo ndị ohu akpọrọ onwe ha 'onye na-elezi anya na onye na-elebara anya' bụ otu ihe ahụ n'oge ọrụ ebe ha 'na-agbasi mbọ ike na ojii iji rụọ ndị agha iji nyere ndị ọrụ ahụ aka ruo ókè o kwere mee. Ndi Ju nwere ike ide akwukwo banyere ya!
N'ime narị afọ gara aga, ndị agha nwụrụ site na 175.000.000. Na mgbakwunye, 'ha' bụkwa maka 262.000.000 (https://meervrijheid.nl/index.php?pagina=74) igbu ha site '' gọọmentị 'nke ha. Onu ogugu a di 50% karie agha nile a jikọtara.
'Ha' amụtala na WW II, mana Ọnwụnwa Nuremberg chọrọ n'ezie igbochi 'ha'…. na stof n'oge a na-eyi balaclavas !! n'ihi na 'ha apughi ime' ọlu ha 'ma ọ bụghị.
Mee ka obi gị wetụ mmiri 🙁
6 December 2019 na 15: 33
Jimmy Lai bụ onye na-akwado ijeri billionaire ma ọ bụ mkpọsa idozi mbipụta nke CIA na Hong Kong nke a na-akpọ
Mkpesa ochichi onye kwuo uche ya.
6 December 2019 na 19: 51
Martin lee echiche ụwa banyere onwe gị, ị ghọtaghị na mgbanwe ihu igwe na-atụnye ụtụ n'ọnọdụ akụ na ụba na ndakpọ akụ na-abịanụ?
Christine Lagarde emeela ka o doo anya na mgbanwe ihu igwe ga-abụ ihe dị mkpa n'oge ọ ga-abụ onye isi ECB, na-atụ aro na ụlọ akụ etiti nwere ike iji usoro ego iji kwado ọnọdụ maka ihu igwe.
7 December 2019 na 19: 10
The psycholances nwere ike ụgbọala ozugbo na-acha ọbara ọbara ọkọlọtọ iji bulie crazy. Nke a bụkwa ihe gbasara ụjọ ọrụ / nkwalite ọrụ.
XanderN dere, sị:
8 December 2019 na 15: 52
Ekwenyere m na gị kwenyere n'ụzọ ọ na-aga, mana ahụghị ngwa ngwa enwere ike ịta ụta maka nsogbu mega / nduku na-abịanụ. N'aka aka nri, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gọọmentị niile ka edebere ya ruo ọtụtụ afọ, ma ọ bụrụ na ha jikwaa ịbanye, a na-eji aghụghọ ojoo megidere (Lega na Italy; FPÖ Austria). AfD, PVV, FVD, RN wdg. Otu niile nke ekwenyero n'iwu nke emere ka amachibido iwepu ya n'ike.
Yabụ kedu ka aga esi ata ụta dị mma ma ọ bụrụ na ha na-eme ebe niile na mmegide (belụsọ na US, agaghị m akpọ Boris Johnson ikike)? Ọ ga-amasị m iche na mgbe nsogbu ahụ, ụmụ amaala na-ata ụta ndị ọchịchị ugbu a (aka ekpe, nke ekpe, akwụkwọ ndụ ekpe na nke ekpe), wee tụọ vootu maka onye ziri ezi na onye ịhụ mba n'anya.
Nwere ike nweta ọnọdụ ị ga - emezi ihe ị ga - eme. Enwere ike ibute nke a site na mgbasa ozi nke mgbasa ozi, yana ike 'ihe ngosi ọkọlọtọ' dị ka nnukwu nke akpọrọ 'right-nku' mwakpo, dịka ọmụmaatụ, ebe ndị gọọmentị, AZCs, alakụba, wdg. / gbanyụọ - enwere ike ịgbatu ọgba aghara ndị na-ewu ewu, nke a na-eji etinye aka na oke nrụgide iji gosipụta ọchịchị aka ike na nkwenkwe ụgha EU.
Ajụjụ dị mkpa bụ ma ha ga - eme nke ọma n'ime ka ọgba aghara, ụjọ na ọgba aghara nke ga - esite na nsonaazụ ahụ achọrọ. Ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na - enweghị ike ịkọ ihe nde mmadụ ga - eme mgbe ọnọdụ ha niile na - ama jijiji. Hà na-arapagidesie ike 'nzọpụta' nke ndị ọhụụ nọ ugbu a gosipụtara, ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ebe gọọmentị wdg, wdg, nke ndị oke iwe ji iwe? Amabeghị m nke ọma na ihe niile ga-aga dịka ọnọdụ dị mma nke ndị zuru ụwa ọnụ siri mee.
8 December 2019 na 17: 19
A na-esite n'elu aka nri wee site na ijikọ echiche niile n'ụdị ụgha iji mebie aha ahụ n'aka nri. Stzọ adịgboroja dị otú ahụ bụ, 'ọmụmaatụ ihu igwe' na 'ndị na-eche echiche ọjọọ'.
Akọwara m nke ahụ n'isiokwu a:
Ọ bara uru ịgụ isiokwu ahụ.
Ama m na ị ka jisiri ike na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi na saịtị gị, mana dịka m siri hụ na ọ dị mkpa ka ị hụ mpaghara ike aka ekpe ahụ. Ọ bụrụ - dịka i gosiri - ị gụọla akwụkwọ m, ị ga-enwerịrị ihe doro anya na nke ahụ. Naanị ajụjụ bụ ma ikwere na enwere ike ịhazi mmegide ma ọ bụ na ịnweghị; Na nkenke, ma 'ike' ahụ na-ejikwa aka ekpe ma aka nri nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mgbasa ozi na nke mgbasa ozi.
8 December 2019 na 17: 23
Enwere ike ijikọ Boris Johnson na aka nri n'echiche nke na ọ bụ pawn nke na - akwali maka ọkwa de Brexit; otu n'ime ube ahụ site n'aka nri.
" Mara akụkọ ihe mere eme iji ghọta usoro UN XX XX
Nrụgide a na-enye ụmụaka dị ukwuu! »
Nleta nile: 16.006.801
kpọọ òké op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1
hennag op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1
Wilfred Bakker op Ọrịa corona ('Wuhan virus') nwere ikike Bekee: ọnụ ọgụgụ EP3172319B1